Miantso mba hamerenana sy hijerena maso indray ny fenitra mifandraika amin`ny filaminana sy fiarovana momba ny fotodrafitrasan`ny kianjaben`i Mahamasina ny CINDH. Tsy tokony hihoatra ny 42 000 ny isan`ny olona zakan`ny kianjan`i Mahamasina kanefa efa tafiakatra avo roa heny no ho izay ny mpijery nandritra ny hetsika. Ankoatra izay, nanome toromarika ho an`ireo mpikarakara hetsika mba hametraka fepetra hentitra sy azo antoka entina hisorohana ny fanosehana izay miafara amin`ny famoizana ain`olona tahaka ireny. An-kilan’izay, takiana amin`ny isam-batan`olona ny fananana fahatoniana hatrany ao anatin`ny fivorina. Farany dia mangataka ny hisian`ny fanadihadiana lalina momba ireo tranga miverimberina nahafatesana olona tao amin`ny kianjaben’i Mahamasina ny CINDH. Naneho fiaraha-miory amin`ireo mana-manjo izy ireo tamin`ny alalan` ny fampitam-baovao izay navoakany.